Banyere Anyị - Shenzhen Yuxingyuan Onyinye Packaging Co., Ltd.
Shenzhen Yuxingyuan Onyinye Packaging Co., Ltd. bụ ọkachamara obibi akwụkwọ na nkwakọ enterprise tụnyere imewe, obibi akwụkwọ na post-nhazi. Ọkachamara na-ebipụta ụdị igbe nkwakọ ngwaahịa ọ bụla, igbe agba, igbe kaadị, kaadị agba, akwụkwọ mgbasa ozi, mkpado, akwụkwọ ntuziaka, akpa akwụkwọ, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ọgụgụ, akara mmado, akara ọba, igbe ọla, igbe ahịa, igbe onyinye, na akwụkwọ ndị ọzọ ebipụtara. ihe. The ụlọ ọrụ mgbe niile na-ewe mmepe nke a elu-tech oge a na-ebi akwụkwọ enterprise dị ka ya mmepe direction, na-agbaso oge, na-eso na nke ugbu a na-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ ọmụma na ọnọdụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere agba agba anọ, agba ise, agba isii na Heidelberg na Komori obibi akwụkwọ, yana iwebata ọhụụ nke ndị na-ebi akwụkwọ KBA zuru oke na Taiwan nwere ike zute mmepụta nke ọtụtụ nnukwu, ọkara na obere igbe, nakwa dị ka ọtụtụ dị elu tupu-pịa, bipụta, na post-pịa nhazi akụrụngwa iji nweta ọganihu na-aga n'ihu nke àgwà ndị ahịa na Nkwupụta ọrụ.
Kemgbe oruru ya, ụlọ ọrụ a na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "ihe ọhụrụ, arụmọrụ, mma, ọrụ", ngwa ọrụ obibi akwụkwọ dị elu, ọkwa teknụzụ ọkachamara, yana nhazi zuru oke iji nye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ nkwakọ ngwaahịa dị elu. All na-nnọọ ka ileta na-eduzi! Njikere isoro gị mepụta echi ka mma.
Nọgide na-enwe ọhụụ, na-aga n'ihu, na-akarị onwe anyị, ma na-ebuwanye ibu ma sie ike. Na-enwe ekele mgbe niile ma na-arụ ọrụ dịịrị gị. Gbalịsie ike maka nsonaazụ ọma ma laghachi ndị ahịa na ndị na-etinye ego.
Ndị ahịa, anyị na-akwado ịba uru na ịchọ mmepe nkịtị na nkwado. Maka ndị otu, anyị na-akwado asọmpi iji kwalite imekọ ihe ọnụ ma wuo echiche mmeri. Maka ndị ọrụ, gbaa ndị ọrụ ume ka ha na ụlọ ọrụ ha too. Maka ọha mmadụ, kwalite ịdị n'otu nke ụlọ ọrụ na ọha mmadụ.
Mmụọ anyị Na-achọ mgbanwe n'echiche, echiche ọhụrụ, usoro ziri ezi, na mmezi ọrụ. N'aga n'ihu na oge, were ohere, imeghari jikoro obodo ọnọdụ, na ọhụrụ mgbe na-agbanwe。
Ghọta ọnọdụ ahụ dum, toaa ntị na nkọwa, gbasoo izu okè, ma gosipụta ịdị mma.
Shenzhen Yuxingyuan Onyinye Packaging Co., Ltd. na-agbaso usoro iwu nke "ntinye aka zuru oke, mmelite na-aga n'ihu, na mmezu nke nkwa ọ bụla nye ndị ahịa", ma guzobe usoro mmesi obi ike zuru oke na sistemụ ọrụ bara uru. Emezu azụmahịa nke ọba ihe osise, ibe agba, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa, igbe ọla mma, ọmarịcha akpa akwụkwọ, igbe agba agba, ọmarịcha igbe onyinye, ọmarịcha akwụkwọ ndetu, akwụkwọ mmado, akara mmado, na ihe ndị ọzọ. nke "ezi obi", "ntụkwasị obi", "ịnụ ọkụ n'obi", "mma" na "arụmọrụ", echiche njikwa nke ịchụso ịdị mma, nke izizi, dabere na ntọala, mmepe ọhụụ, na-adabere na njikwa sayensị na akụrụngwa dị elu, Teknụzụ kachasị mma, elu -ezu oke ọrụ, merie ude nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa, ndibọhọ a elu ahịa aha na ịtụkwasị obi.
Companylọ ọrụ ahụ kwenyere mgbe niile na "ogo bụ ndụ nke ngwaahịa ahụ, na ịtụkwasị obi bụ isi nkuku nke ụlọ ọrụ ahụ". Anyị ga-ike a zuru okè oyiyi nke ahịa afọ ojuju na mbụ na klas ọrụ, mbụ na klas management, na mbụ na klas mma, na mejuputa àgwà mmata n'ime dum ọrụ nke na-ebi akwụkwọ na ngwaahịa, merie ntụkwasị obi na nkwado nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ezi ihe, na mepụta echi ka mma ndị ahịa. Jiri obi gị niile nabata ndị mmadụ site na ụdị ndụ niile ịbịa leta ma kwado!